Ogaden News Agency (ONA) – Xuskii malinta Xasuga Ogadenya iyo Minnesota.
Xuskii malinta Xasuga Ogadenya iyo Minnesota.
Posted by ONA Admin	/ March 1, 2015
Minneapolis, Sabti, 28 February 2015, Waxaa manta holka xafiska Jaliyada Ogadenya ee gobolka Minnesota ka dhacday munasabad baroordiiq ah oo lagu xusayay xasuqa ka socda Ogadenya oo ay gaysanayaan gumaysiga Ethiopia.
Munasabadan ayaa waxaa siwada jir ah oo aad u habsan u soo diyaraiyay jaliyada Somalida Ogadenya oo uu hogaminayo gudomiyaha jaliyada mudane Cabdinasir Gani iyo ururka dhalinta iyo ardayda ogadenya oo uu hogaminayo xoghayahooda mudane Anwar Axmed.
Kulankan ayaa si aad ah looga soo qayb galay ayadoo ay joogeen bulshada qaybaheeda kala duwan waxana munasabada khudbado qiira leh ka soo jediyay siyasiyiin, aqonyaha iyo ururada bulshada qaybahooda kala duwan.
Waxaa madasha lagu soo bandhigay cajalado maqal iyo muuqaal ah oo mujinayay tacadiyada ay cidamada gumaysiga Ethiopia u gaystan shacabka Ogadenya ee aan waxba galabsanin.
Munasabadan ayaa dhanka kale lagu soo bandhigay magacyadii qaybo kamid ah dadkii sida gardarada ah loogu gumaday gobolada Ogadenya.
Munasabadan ayaa ahayd runtii madal ay ka muqatay saan saan muro iyo tiranyo ayada oo ay ahayd goob lagu xusaya xasuqii sahacabka Ogadenya lagu gumaday.
Iskusoo xoriyoo, madashan ayaa ku soo dhamatay sidii lagu talagalay, ayaadoo dhamanba dadkii ka soo qayb galay halkasi lagu gudoonsiiyay cajalad tarikhi ah oo lagu soo aruriyay gabood falada arxan darada ah ee sida joogtada ah loogu gaysto shacabka Ogadneya.